Iphrojekthi Yokudonswa Komfula iJhelum Eduze Kashmir kuTrack Right
UJammu noKashmir: UMfula uJhelum Project kuTrack Right
Iphrojekthi yokufuna ukusindisa umfula umfula iKashmir osezingeni eliphezulu iJhelum isiqalile ukuveza imiphumela emihle nohulumeni waseJammu naseKashmir ukuthi isongo sezikhukhula sidalwe yizimvula ezisanda kwedlula ngenxa yokwehla kwezinyathelo zokonga emfuleni osenyakatho yeKashmir.
IJhelum okuwumthombo ophambili wokunisela eSigodini ibilokhu igudluzwa yisilonda esithe xaxa emashumini eminyaka edlule. Ngaphandle kwezindlela zokonga, umfula ubusuphelelwe ngumthamo futhi uholele ekunqandeni kwesiteshi saso esisodwa esivelayo eBaramulla, okubeka engcupheni yezikhukhula eSigodini.
Ngemuva kokulibaziseka okweqile amashumi eminyaka, i-Jhelum Conservation Project yethulwa nguNgqongqoshe Omkhulu, u-Omar Abdullah, osenyakatho neKashmir esifundeni saseBaramulla ekuqaleni konyaka. Imizamo yokulondolozwa kwemvelo ithola umfutho omkhulu ngemuva kokuthi uHulumeni ethengise ama-dredger amabili asebusweni enziwe eMelika ukwenza umsebenzi wokudonswa phansi.
"Imisebenzi eqhubekayo yokulondolozwa eJhelum esifundeni saseBaramulla ibe yimpumelelo njengoba sikwazi ukugwema ukusongelwa kwezikhukhula muva nje. Ngokuhlala phansi njalo sasusa imigwaqo emfuleni eBaramulla futhi sakhuphula amandla okuphuma komfula," UTaj Mohi-ud-Din, uNgqongqoshe Wezokunisela Nokulawulwa Kwezikhukhula utshele uGreater Kashmir.
Ukusuka eVerinag eningizimu yeKashmir, iJhelum ihlanganiswa nemifudlana emine, iSundran, iBrang, i-Arapath neLidder eningizimu nesifunda saseKashmir's Islamabad (Anantnag). Ngaphandle kwalokho, imifudlana emincane efana neVeshara neRambiara nayo isuthisa umfula ngamanzi amasha.
I-Jhelum meanders ngendlela enenyoka ukusuka eSouth kuya eNyakatho Kashmir futhi ihlala eWullar, echibini lamanzi amakhulu amnandi kakhulu e-Asia, ngaphambi kokuthulula ePakistan kulawulwa iKashmir ngokusebenzisa iBaramulla. Ochwepheshe bathi isikhukhula esidabukisayo esise-1959 sidale imiphumela yasemanzini eJhelum ngenxa yokuphuma kancane kweWullar Lake enyakatho yeKashmir okucishe kwaxoshwa ngokuqolwa okuningilizayo kwesiteshi esikhulu esincishisiwe.
"Sisuse amathani kasilika esiteshini sokuphuma. I-Jhelum Conservation Project iyazondla njengoba ukuthengiswa kwezilonda kulanda uHulumeni kuma-rupees ama-crores amabili ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Sizosebenzisa le mali ukulondolozwa komfula isikhathi eside,"UTaj uthe ukungezelela ama-dredger amabili aseMelika kwenze ukuthi inqubo yokulondolozwa kwemvelo iqhubeke ngokushesha.
Ama-dredger akhiqizwe yi-US-based I-Ellicott Dredges-Umunye wabakhiqizi abadala kakhulu bezinto zokuhlobisa. Ngeshwa, i-Ellicott Dredges iye yanikela nge-dredger yokuqala yokulondolozwa kweJhelum e1960. I-dredger yathathwa nguNdunankulu ngaleso sikhathi uJawahar Lal Nehru.
Kutholakale ngentengo yama-Rs 12 crores, ama-dredger aqanjwe ngo-Soya II no-Budshah II aklanyelwe ukwenza ukudana okujulile. U-Aijaz Rasool we-KEC Mumbai omele i-Ellicot Dredges eNdiya, uthe lo msebenzi wokudicilela phansi usuqhubeke ngokuphelele eJanbazpora naseJuhama eBaramulla.
“Ngokuhlala sishonile kulezi zindawo singadedelana nezikhukhula zeminyaka eyikhulu ezigodini. Kepha lokhu bekungenakwenzeka ngaphandle kwabashokobezi, ” wanezela.
Izikhulu zithi ngaleso sikhathi uNdunankulu waseJammu noKashmir Bakshi Ghulam Muhammad ngasekupheleni kwama-50s babeye kuHulumeni waseNdiya beyofuna izeluleko zalabo onjiniyela nezisombululo zobunjiniyela kule nkinga. Ngaphansi kokuholwa ochwepheshe beCentral Water Commission, kwenziwa uhlelo lwe-Master Plan lokudicilela phansi imisebenzi yeJhelum kusuka eWullar kuya eKhadanyar.
Le phrojekthi ibicabanga ukujula nokwandiswa kweJhelum kusuka eSingli kuya eSheeri ngabakwa-mered dredger. Kodwa-ke ngaleso sikhathi, ama-dredger ayengekenziwa noma atholakale kalula eNdiya. Iziphathimandla zithi kungenxa yokugenelela komuntu siqu kukaNdunankulu ngaleso sikhathi uJawahar Lal Nehru ukuthi abathengisi ababethembekile bathengwa.
"Kodwa-ke, ukusebenza kwe-dredging kuqhubeke kuze kufike ku-1986. Imiswe okwesikhashana ngenxa yokuntuleka kwezinsiza ezanele nezindawo zokusekelayo. Kusukela ngaleso sikhathi amathani okugcotshwa kwe-silt kwenzeke eJhelum ngenxa yokuwohloka okusheshayo kwezindawo ezabanjwa kuzo. Lokhu kunciphise ukusebenza kwezikhukhula ngokufana kwesiteshi sikaJhelum nokukhokhisa kwawo umthamo osuka kuma-35000 cusecs e-1975 kuya kuma-cusecs we-20000 njengamanje,"Kusho izikhulu.
UMnyango Wokulawula Ukunkanisa kanye Nezikhukhula e2009 uthumele iphrojekthi ye-Rs 2000 crore eMnyangweni Wezemithombo Yamanzi ukuze kutholwe unswinyo. Le phrojekthi ifaka phakathi imisebenzi eminingi yokubuyiselwa komhlaba okubandakanya ukwenziwa ngcono kokudalwa kukaJhelum okukhona kweziteshi eziphumayo, ukuvikelwa nokusebenza kokulwa kokuguguleka komhlaba kanye nokukhulisa ukusebenza kahle kwe-hydraulic.
Kodwa-ke, uMnyango uvume kuphela ingxenye yephrojekthi ebiza ama-Rs 97 crores ukwenza lula ukungenelela okusheshayo kubandakanya ukutholwa kwemishini nokushiswa eJhelum, ikakhulukazi eziteshini zayo zokuchitheka kwezikhukhula eSrinagar kanye nokuphuma kwezikhukhula eDaubgah naseNangli eBaramulla.
UTaj uthe yonke imininingwane emayelana namazinga wokuphuza nokuphuma kwabantu, i-gauge yezikhukhula kanye namandla ethwala iJhelum kule minyaka edlule ye-50 kufakwe kwidijithali.
"Siphinde futhi saqala neziteshi zokuchitheka kwezikhukhula eSrinagar nasezindaweni ezihlangene ngaphandle kokuzulazula komgwaqo kusuka eSonwar kuya e-Old City. Ngemuva kokuphinda kudilizwe, sihlela nokususa konke ukungeneka osebeni lomfula kusuka e-Islamabad kuya eBaramulla. Eminyakeni embalwa, iJhelum izobuyiselwa ebuhleni bayo obukhulu, " UTaj ungeziwe.
Kuphrintiwe kusuka DredgingToday